Bianco faritany Antananarivo : mahabe fitarainana ny kolikoly amin’ny fananan-tany sy ny fitsarana | NewsMada
Bianco faritany Antananarivo : mahabe fitarainana ny kolikoly amin’ny fananan-tany sy ny fitsarana
Nanao tatitra ny momba ny ady amin’ny kolikoly ny eo anivon’ny Bianco, rantsana Antananarivo, teny Ambohibao, omaly. Sehatra dimy no nahitana kolikoly be indrindra ho an’ny taona 2019.
Ny fananan-tany nahazoana fitarainana 320, ny Fitsarana 265, ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana 159, ny Zandarimariam-pirenena 147, ny fampianarana 98. Ireo sehatra dimy nahazoana fitarainana be indrindra teny anivon’ny Bianco, faritany Antananarivo, taona 2019, araka ny fanazavan’ny tale misahana izany, Razafimandimby Tsiry Harivelo, teny Ambohibao, omaly.
Miisa 2 158 ny fitairainana voaray, ka 869 ny momba ny kolikoly. 246 ireo antontan-taratasy nokirakiraina, taona 2019, raha 59 ny 2018. Miisa 132 ireo raharaha nalefa any amin’ny Fitsarana, raha 20 izany tamin’ny 2018. 361 ireo olona nosamborina, ka notanana am-ponja ny 72.
Tsy midika ho fitomboan’ny kolikoly ny fahazoana fitarainana be lavitra no ho ny teo aloha, raha ny fanazavana. Maneho ny fandavan’ny olona kolikoly sy ny fahasahiana mitoroka ny fitomboan’ny fitarainana voaray. Nahataratra 3 201 ny nanao fanambaram-pananana, taona 2019, raha 2 133 izany ny 2018.
Mila mandray anjara amin’ny ady ny rehetra
Anisan’ny asan’ny Bianco, taona 2019, ohatra, ny fametrahana “sit web”: “i-Toroka”, izay nampitombo ny fitarainana voaray. Teo koa ny fametrahana biraom-paritra any Morondava, faritra Menabe. 23 ny tambajotra vaovao ho an’ny tanora amin’ny ady amin’ny kolikoly. 1 100 ireo mpikambana vaovao nandray anjara tamin’ny andro manokana natao tany Miarinarivo sy Tsiroanomandidy.
Amin’ny sehatra fisorohana ny kolikoly, nisy, ohatra, ny fanaraha-maso sy fiarovana ny fifaninanana efatra amin’ny fitantanan-draraharam-panjakana: fidirana amin’ny sekoly manamory fiaramanidina eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, ny an’ny IGE, ny INFA ary ny Acmil.
Hoezahina hatao birao iraisam-paritra amin’ny faritra Melaky, ohatra, ny biraom-paritra any Morondava, faritra Menabe. Heverina ny hanao biraom-paritra iray isaky ny faritany amin’ity taona ity, raha azo ny tetibola ho amin’izany. Politika vaovaon’ny Bianco ny fampandraisana anjara ny mpisehatra rehetra amin’ny ady amin’ny kolikoly.